ဝါခေါင်မိုး: မေချက်ပါသည် စပါ့ဂတီ
West Baray, Siem Reap (The largest reservoir of ancient Angkor era)
အီတလီ ခေါက်ဆွဲ …
ငြင်းပါနဲ့ မောင်ကြီးရှင် …
Posted by မအိမ်သူ at 3:47 PM
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး, စားဖွယ်ရာ
တကယ်ကို စားကောင်းမယ့် ပုံလေးဘဲ
June 23, 2011 7:05 PM
စပါ့ဂတီကို အန်တီတို့ သားအမိတွေ အတော်နှစ်သက်လို့ အိမ်မှာ မကြာခနလုပ်စားဖြစ်တယ်လေး)
အခု မအိမ်သူဘလော့ဂ်မှာ ထပ်တွေ့လိုက်တော့ ဒီရက်အတွင်း လုပ်စားအုံးမယ်ကွယ်။
ကြိုက်တယ် ချိစ်များများနဲ့ ပိုတောင်ကြိုက်သေးး)
ကဗျာလေးနဲ့ စပါဂတီကိုချက်ထားတာ လိုက်မှလိုက်
June 23, 2011 9:49 PM
June 24, 2011 2:29 AM
အစ်မအိမ်သူရဲ့ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ ပြုံးမိတယ်။ စပါဂတီလည်း စားသွားတယ်နော်။ အစ်မရေ... လုပ်နည်းလေးတွေပါ အဆင်ပြေရင် ထည့်ရေးပေးပါနော်။
June 24, 2011 3:26 AM
ကြည့်ဦး.. ကြည့်ဦး... စပါကတီလေးကလည်း စားချင်စဖွယ်.. ကဗျာလေးနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ထားတာလည်း ကောင်းမှကောင်း... :P.. စပါကတီကြိုက်လွန်းလို့ အိမ်အလည်တောင် လာချင်ပါ့... ဟိဟိ
June 24, 2011 7:24 AM
Ma Eain Thu
ခုတလောမှာ ...း)
ဒီဘလော့ဂ်လေးထဲ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ ပြန်လည် စီးဆင်းလာဖို့ ခွန်အားတွေ ပြန်စုနေရတယ်။ ဘလော့ဂ်လေး ငြိမ်သက်နေတာကို ပြန်လည်ပြီး အသက်သွင်းကြည့်ပါမယ်လို့... ♥♥♥
မှတ်သားစရာ သရဲတစ္ဆေနဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းများ
Ghost လို့ခေါ်တဲ့ သရဲအကြောင်း ဘယ်တုန်းကစသလဲလို့မေးရင် ဘယ်သူမှတော့ တိတိပပ ဖြေနိုင်ကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သရဲအကြောင်း ဆိုရင်တော့ ဟုတ်တ...
ဒွာ ဒသမ ရတု
နှလုံးသားထဲမှာ ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့ လက်မှတ်ကလေးတွေရဲ့သက်တမ်းဟာ ရာသီစက်ဝန်းတွေကို ၁၂ကြိမ်တိုင် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီ။ ရေးထိုးစဉ်ကအတိုင်းပဲ မှင...
မအိမ်သူတို့လို အိမ်ရှင်မတွေအဖို့မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့်အိမ်သား လျှာရင်းမြက်စေဖို့၊ ကိုယ့်သားသမီးတွေ ခံတွင်းတွေ့ကြစေဖို့ ဆိုပြီး မီးဖိုေ...
မအိမ်သူက အင်မတန်အသုပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အသုပ်မရှိတဲ့ အရပ်မှာ မအိမ်သူနေလို့မရပါဘူး။ အသုပ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံဘဲဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးကိုကြိုက်တာပါ။ Mayon...
မိအေး နာရခြင်း အကြောင်း
အဖြစ်သနစ်ကြောင့်လား၊ ခေတ်စံနစ်ကြောင့်လား အမှားတွေက အမှန်ဖြစ်သယောင်နဲ့ အညစ်အမှောင်တွေကသာ ထင်ပေါ်လွန်းနေခဲ့မှတော့ ဖြူစင်ခြင်းတစ်စကို...
ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ပို့စ်အသစ်လေးတွေ ပြန်ရေးနိုင်ဖို့် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အားမွေးဖို့အတွက် အစားအသောက်ကလေးတွေဖက်ကို တစ်ချက...
ခမာပြည်အကြောင်း တစေ့တစောင်းလေး သိရအောင် ဒီနေ့တော့ ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ စကားပြောကြရအောင်နော်။ ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ စီးတော်ယာဉ်များ အကြောင်းပါ။ အဓိကအကျဆ...
ဟိုတစ်ပတ်က Facebook ပေါ်လျှောက်လည်ရင်း အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် ရဲ့ facebook wall ပေါ်မှာခေါပုတ်ကြော်သွားတွေ့တယ်။ ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီးတော့ သွားရေက...
လာချင်ရင် အနီးလေး၊ မလာချင်ရင် ခရီးဝေးတဲ့...။ လာချင်ပါလျက်နဲ့ မနီးတဲ့ခရီးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ ခရီးဝေးတိုင်းလည်း မလာချင်တာ မဟုတ်သလို နီးပ...
မအိမ်သူတစ်ယောက်လဲ ခမာနှစ်သစ်ကူးနေလိုက်တာနောင်နှစ် နှစ်သစ်ကူးထိများ ရောက်တော့မလို... စမိတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ဖို့ရာ ဒီကြားထဲမှာ မအားတာရယ်... တြ...
မှတ်သားဖွယ်ရာ အဆိုအမိန့်များ (1)
အတွေ့အကြုံ အပိုင်းအစများ (3)
တွေးမိတွေးရာ စာစုများ (8)
လောကကြီးကို ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ရှုမြင်နိုင်တဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြတင်းပေါက် ကလေးတစ်ခုကို
ဒီ ဝါခေါင်မိုး ဘလော့ဂ်လေးကို
စီဘောက် က စပမ်းတွေအတွက်
နှစ်ချို့ သွားခဲ့သော ...
တစေ့တစောင်း ခမာတို့ရဲ့ တိန်း(ဂ်)မောင်း
သေစေညွှန်း (အပိုင်း နှစ်)
သေစေညွှန်း (အပိုင်း တစ်)
မှတ်သားစရာ ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ
သမတဇာတာ မပါတဲ့အမျိုး - တမြန်နှစ်က ဒီလိုနေ့မှာ အင်ဒီယာနာပလစ်မြို့ကနေ မြောက်ဖက်တည့်တည့်မှာရှိရှိတဲ့ ဆော့သ်ဘင်းဒ်မြို့ကိုသွားပြီး၊ တရားရုံးတခုမှာ သားတယောက်က စီတီဇင်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာဆ...
စကားလုပ်ကြံပြောသူ ... - အသိအစ်မတစ်ယောက်ဟာ စာကြိုးစားတယ်၊ အလုပ်အရမ်းလုပ်တယ်၊ သူတပါးကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကူညီတတ်တယ်၊ ချစ်စရာအသံလေးနဲ့အားပေးကူညီတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားကိုလုပ်ကြံ...
ဟကျန်းသို့မဟုတ် တောင်တန်းမြေသို့ - ဂျပန်ခရီးစဉ်မှာ မလိုက်ရတဲ့ သူတယောက်အတွက် ဒီခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရယ် မိသားစုရယ် ဖိအားတွေ ပိနေတယ်ဆိုတော့ တောင်တန်းတွေကြည့်ဖို့ စိတ်တွေစိမ်းလန်း...
ကိုယ်...ချစ်၍ ကိုယ် ဖန်တီးပါသော ''စာပေအနုပညာ''
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို ခံစား ဝေဖန်ခြင်း - မုဒြာရဲ့ခေါ်သံကို ခံစား ဝေဖန်ခြင်း ''သင့်အေးရိပ်'' --------------------------------------- အခုတလော လူပြောများခဲ့တဲ့ မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သ...
Atta Kyaw & Lettwebaw Books
မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ကြယ်ကလေးတွေ.. - အကြောင်းကိစ္စရှိတိုင်း ဒီနေရာလေးကို ဖြတ်သန်းသွားလာ ပြုဖူးနေကျပေမယ့် မှတ်မှတ်ထင်ထင် သတိမပြုခဲ့မိပေ။ ခုလည်း သားကြောင့်သာ မဟုတ်လျှင် ဒီ...
အိပ်ဆေးမစားဘဲ အိပ်ပျော်စေနိုင်မည့် သဘာဝနည်းလမ်းများ - ( အိပ်ဆေးမစားဘဲ အိပ်ပျော်စေနိုင်မည့် သဘာဝနည်းလမ်းများ ) လူအပါအ၀င် သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မရှောင်လွှဲနိုင်သော အလုပ်သုံးခုမှာ စားခြင်း၊ အိပ်ခြင်...
ဝါခေါင်မိုး by Ma Eain Thu. Watermark theme. Powered by Blogger.